Vokatry ny haitany :: Tandindonin’ny mosary any atsimon’ny Nosy • AoRaha
Vokatry ny haitany Tandindonin’ny mosary any atsimon’ny Nosy
Manahy ny hisian’ny mosary ny mponina any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Anisan’ny faritra ahiana hiharan’izany olana ara-tsakafo izany ny any Ambovombe, Beloha, Tsihombe ary Bekily. Fotoana maromaro izao no efa nanao antso avo amin’ny hisian’ny fandraisana andraikitra ireo mponina any. Efa hatramin’ny faran’ny taona 2019 no tsy nisy orana intsony tany an-toerana.
“Tany amin’ny volana novambra tany no nisy orana farany taty amin’ny faritra Atsimo. Maina ireo hazo isan-karazany sy ny voly samihafa. Ireo paompin-drano efa tsy mandeha intsony tato anatin’ny efatra herinandro izao ho an’ireo tanàna manana an’izany, hany ka amidy lafo ny rano izay taomina avy any amin’ny ranomamy”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Nambaran’io tompon’andraikitra avy any Ambovombe io, fa miakatra tsy misy fitsaharany ny vidin’ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro tato anatin’ny fotoana fohy. “Tsapa ihany koa, tato ho ato, fa mahasahy mivarotra ny vokatry ny fiompiana, toy ny omby aman’osy ny olona. Hahafahan’izy ireo mividy sakafo eo no ho eo mba hiatrehana ny fiainana andavanandro izany”, hoy ny fanampim-panazavan’iry olona any Ambovombe iry. Miha maty tsikelikely noho ny tsy fahampian’ny rano rahateo ireo omby sy osy any an-toerana.
Fivoahana eto Antananarivo Maro ireo fangatahana alalana manokana nolavina
Fialàna any Shina :: Mpianatra malagasy iray nahafeno fepetra fangatahana hody
Fiparitahan’ny valanaretina :: Olona efatra voamarina fa voan’ny pesta